yakakwirira frequency Induction Kugadziriswa Brass Corner Joint
Yakakwira Frequency Induction Kutengesa Brass Corner Joint
Akabudirira kutengesa maviri 45 ° endarira kona makona.
DW-UHF-10kw induction kutengesa heater
StayBrite # 8 sirivha inotengesa yakapihwa nemutengi
Bridgit solder flux inopihwa nemutengi
Brass kona yakabatana
Simba: 5.5 kW
Kupisa: Zvinenge 550 ° F (288 ° C)
Nguva: 20 sec
Flux inoiswa kwese kwese majoini.
Iyi gungano yakarongedzwa kuti ipire
Induction kupisa kunoiswa kune 15 sec
Tsvimbo yacho inopenya inoiswa pabatanidzwa
Sezvo iyo brazing alloy ichidyiwa pamurume, iyo coil inoiswa pasi pejoini, yakatarisana nerutivi rwunooneka rwefuremu. Rutivi runooneka rwejojo ​​iripo pamusoro pehuni yepuranga, iyo isingatenderi iyo yekumeso inoburitsa kuti iburuke uye isate. Izvi zvinoita kuti ivhu rirambe rakachena uye rakachena, nepo mushini uri mukati wakasvibiswa.
Kana solder paste inoshandiswa, saka coil inogona kuiswa pamusoro pejoinhi. Kana yakakoswa maviri coil inoshandiswa, saka majoini ese (kumusoro uye pasi) anogona kuitwa nekupfura kumwe.
Hapana chimiro chekuputira chinodikanwa mune ino kesi. Ona vhidhiyo uye zoom iyo mifananidzo yakasungirirwa kune rumwe ruzivo.
Iko hakuna kuchenesa kwakakosha kunodikanwa kune ese maviri edivi. Ma sampuli pamifananidzo anga ari mapepa tauro akapukuta chete.
Categories Technologies Tags high frequency soldering, induction mutengesi, induction soldering, induction kutengesa kona, induction soldering heater, induction soldering machine, soldering, soldering brass, Kutengesa mhangura yendarira, Kutengesa ndarira pamwe chete, soldering mhangura, soldering induction muchina Post navigation